Daawo Video Qosol leh: Tartanka Xambaarka xaasaska oo la qabtay iyo rag ay ceeb ka raacday. - Caasimada Online
Home Nolosha Daawo Video Qosol leh: Tartanka Xambaarka xaasaska oo la qabtay iyo rag...
Daawo Video Qosol leh: Tartanka Xambaarka xaasaska oo la qabtay iyo rag ay ceeb ka raacday.
Haddii ay dhacdo xaalad deg deg ah, illaa intee la eg ayaa lamaanahaaga ama xaaskaaga bad baadin kartaa oo aad dusha ku xambaari kartaa?, haddaba haddaadan hubin waxaad u baahan tahay inaad is tijaabiso.
Gobolka Maine ee dalka Mareykanka, ayaa waxaa lagu qabtay tartanka xambaarka xaasaska, ayada oo raggu ay dusha ku qaadayeen xaasaskooda. Waxa ay mareen meelo dhib badan, sida buuro gacanta lagu sameeyay, biyo iyo meelo dhiiqo ah, waxaana halkaas ku haftay ceebna ay ka raacday ragga qaar.
Haddaba halkan ka daawo.